I-Central Studio ene-pool"s bar!!!! - I-Airbnb
I-Central Studio ene-pool"s bar!!!!
Pattaya City, Chon Buri, i-Thailand
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Kib
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Kib izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Centra Avenue isenkabeni yePattaya kodwa uma usungaphakathi ngeke wazi. I-swimming pool izungezwe izihlahla kanye nokuwa kwamanzi okwenza indawo enokuthula endaweni engcono kakhulu nentsha edolobheni. Ngaphansi kwemizuzu emi-5 uhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni zokucima ukoma, inxanxathela yezitolo, iMacDonald's, i-Starbucks, i-sushi buffet, i-massage, i-bowling, i-cinema, izindawo zokudlela zamazwe ngamazwe nokunye okuningi.
Ichibi lokubhukuda elihle liyingxenye ephakathi nendawo e-Centra Avenue nge-MyPattayaStay - equkethe ama-waterlides, izimpophoma kanye nokubhukuda ukuya endaweni yokucima ukoma nama-cocktail nazo zonke izinhlobo zotshwala nezingezona ezotshwala. I-swimming pool inamagumbi okuphumula nezihlalo ukuze uphumule futhi ujabulele isimo sezulu.
Indawo yokudlela esezingeni eliphezulu enezipesheli ze-buffet zansuku zonke, kanye nama-pizza nokunye ukudla okulula okumnandi kudume kakhulu futhi kumnandi.
Kukhona i-Wi-Fi esizeni ekamelweni kanye nezindawo zomphakathi.
Ukuphepha kwamahora angu-24, i-cctv, indawo yokupaka engaphansi komhlaba kanye nokufinyelela kwamakhadi okhiye kusendaweni ukuze kunikeze ukuphepha okuphezulu ezivakashini zethu.
Isikhala / Amakamelo
Igumbi elihle lesimanje eliklanywe nge-balcony lisebenza ngokugcwele - linekhishi - elinamabhodwe, amapani, izitsha, imimese, izimfoloko, izinkezo, i-microwave, i-hotpoint, i-toaster neketela.
Kukhona ne-TV entsha sha enokukhetha kuzo izilimi eziningi, isiteshi semuvi YAMAHHALA neziteshi zezindaba zomhlaba wonke.
Igumbi line-Wi-Fi YAMAHHALA esheshayo nethembekile.
Indawo ephelele! Ukuhamba ibanga ukuya ePattaya Beach. Emnyango weThe Avenue Shopping Mall enejimu yayo engama-24hr, i-bowling alley nesinema. Lapha unesitolo esikhulu esinokukhetha ukudla kwamazwe ngamazwe, izindawo zokudlela zamazwe ngamazwe kanye ne-buffet nokunye okuningi.
Kwabahambeli bephathi - i-Soi Buakhoaw inezindawo zokucima ukoma ezingu-100 nezindawo zokuphuza izingxoxo nokuzijabulisa. Kukhona amabha omculo abukhoma futhi adlala wonke amahithi akudala adlule namanje.
Ekupheleni komgwaqo kukhona i-Walking Street edume umhlaba wonke lapho abantu abaningi beqeda khona kusihlwa ezindaweni zokucima ukoma noma kuma-disco.
Isiqhingi sase-Koh Larn siqhele ngesikebhe esifushane ukusuka ku-pier ekugcineni kwe-Walking Street futhi sinconywa kakhulu uma uthanda amabhishi amahle anesihlabathi.
I-Pattaya inemibukiso, amamasaji e-Traditional Thai, inkundla ye-Thai Boxing, izindawo ezihlala emanzini, ama-zoo, amapulazi, iminyuziyamu, amathempeli, izimakethe, izikhungo zokuthenga, imidlalo yasemanzini, uhambo lokuzidela, izikole zokupheka zase-Thai, izindawo zokungcebeleka nokunye - okwenza kube mnandi kubo bonke ubudala nabantu.
Uma uthanda ukuba senkabeni yedolobha futhi usenokuthula nokuthula endaweni enhle, khona-ke i-Centara Avenue nge-MyPattayaStay iyisinqumo esihlakaniphile - konke okudingayo kungakapheli imizuzu embalwa yokuhamba, izixhumanisi zokuhamba ezihamba phambili edolobheni, usuku nosuku. i-nightlife, izindawo zokudlela zamazwe ngamazwe neze-Thai, ulwandle, i-cinema, isitolo esikhulu nokunye okuningi.
4.58 · 24 okushiwo abanye
Izilimi: English, Deutsch, Italiano, ภาษาไทย
Hlola ezinye izinketho ezise- Pattaya City namaphethelo